News Collection: काठमाडौंमै उपलब्ध छन् सेक्सटोयहरू
काठमाडौंमै उपलब्ध छन् सेक्सटोयहरू
यौन सम्बन्धमा समस्या हुनेहरूका लागि कृत्रिम यौनाङ्गको प्रयोग उपयुक्त हुने कुरा पुरानो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्रविण ढकाल भन्छन्-'कुरा के हो भने नियमित फ्रेन्ड्ली सेक्स गरिरहेका दम्पतीले वाइल्ड सेक्सको चाहना राख्ने क्रममा अत्यधिक सन्तुष्टिका लागि यस प्रकारका साधन प्रयोग गर्ने हो।’ स्वीट सेक्रेटमा पुरुषलाई चाहिने २७ प्रकारका महिला कृत्रिम यौनाङ्ग उपलब्ध छन्, जसमा डबल भेजिना भएको डल पनि छ।
यौनसम्पर्कका लागि राशिले कति फरक पार्ला ? कतिपयलाई लाग्न सक्छ, खासै फरक पर्दैन तर अनुसन्धानकर्ताहरू राशिअनुसार सेक्स सम्बन्ध प्रभावकारी हुने बताउँछन् । जतिसक्दो यौनसन्तुष्टि लिने चाहना अक्सर सम्बन्ध राख्नेहरूबीच हुन्छ, यही चाहनालाई बुझेर विभिन्न कम्पनीले राशिअनुसार सम्बन्धलाई रोमाञ्चक बनाउने साधनहरू पनि बजारमा ल्याएका छन् ।
नेपाली बजारमा राशिअनुसार कन्डम पाइन्छ भन्ने पनि धेरै कमलाई थाहा होला । '१२ राशिका मानिसको आ-आफ्नो यौन स्वभावअनुसार १२ थरीकै कन्डम उपलब्ध छन्,' नेपाली बजारमा यौनसम्बन्धसँग सम्बन्धित कृत्रिम उपकरणहरू आधिकारिक रूपमा बिक्री गर्ने न्युरोडस्थित प्रेक्सिस ग्रुपको आउटलेट स्वीट सेक्रेटका प्रबन्ध निर्देशक मन्जित पौडेलले भने-'यसको प्रभावकारिताका विषयमा उपभोक्ता आफैंले उपयोग गरेर परीक्षण गर्न सक्छन् ।'
आधुनिकतासँगै नेपाली समाज यौनका विषयमा पनि खुला बन्दै गएको छ । व्यवसायीहरूले यौन प्रयोगका निम्ति भित्र्याएका कृत्रिम उपकरणको बजार पनि बृहत् हुँदै गएकाले यस विषयमा चासो बढ्न थालेको छ । 'नेपालमा पनि अत्यधिक सन्तुष्टिका लागि कृत्रिम सेक्सुअल अर्गान प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ ।' दर्जनौं ब्रान्डका कन्डम तथा कृत्रिम यौनाङ्गको आधिकारिक विक्रेता स्वीट सेक्रेटका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल भन्छन्- 'प्राकृतिक यौनसम्पर्कबाट वञ्चित वा आकांक्षाबमोजिम चरम सुख नपाएकाह रूले यस प्रकारका सहयोगी साधन तथा कृत्रिम यौनांग खरिद गरेर पर्याप्त आनन्द लिन सक्छन् ।'
नेपालमा सेक्सुअल अर्गानको बजार गत वर्ष नै प्रारम्भ भए पनि ठूलो स्वरूपमा यसको व्यवसाय यसै वर्षदेखि प्रारम्भ भएको छ । समाज विकासको क्रमसँगै आएको कृत्रिम सेक्सको अवधारणा अब सामान्यीकृत हुँदै गएको यसले प्रस्ट पार्छ । न्युरोडस्थित स्वीट सेक्रेटमा दर्जनौं ब्रान्डका कन्डम तथा कृत्रिम यौनाङ्ग भेटिन्छन् । राशिअनुसारको कन्डम मात्र होइन, विभिन्न फ्लेभरका ललिपप, चकलेट आदिको स्वरूपका कन्डम त्यहाँ उपलब्ध छन् । आफूलाई मनपर्ने उपभोग्य वस्तु चकलेट, ललिपपको स्वरूपमा कन्डम पाउँदा सम्बन्ध राख्नेहरू अझ रोमाञ्चित हुन सकून् भन्ने आशयले कम्पनीहरूले यस्ता स्वरूपमा अस्थायी साधन विकसित गरेको पौडेल बताउँछन् । रातको समयमा चम्किने नाइट ग्लो कन्डम, किरिङसहितको कन्डम, पटक-पटक प्रयोग गर्न मिल्ने क्रिस्टल कन्डम स्वीट सेक्रेटमा छन् । त्यतिमात्र होइन्, एप्पल, जिन्स, लभ, इलाइट, प्लेजर विशेशता भएका कन्डम पनि त्यहाँ छन् । म्युजिकल कन्डम पनि उपभोक्तालाई आकषिर्त गर्ने किसिमको छ । लामो समय सम्पर्क राख्न बेन्जोकेन रसायन मिश्रण भएको कन्डम पनि स्वीट सेक्रेट ल्याएको छ ।
'ओरल सेक्स मन पराउनेहरूका लागि बनाना, स्ट्रबेरी आदि विभिन्न स्वादका ओरल कन्डम पनि छन्,' स्वीट सेक्रेट प्रमुख कार्यकारी प्रबिण ढकालले भने- 'ओरल कन्डम स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विकास भएकाले यसले एक प्रकारको रोमाञ्चकतासँगै सुरक्षा पनि दिन्छ ।'
स्वीट सेक्रेटमा विभिन्न स्वरूपमा कृत्रिम यौनाङ्गसमेत राखिएका छन् । 'अहिले हामीसँग ५७ थरीका यौनाङ्ग छन्,' प्रमुख कार्यकारी ढकालले भने- 'पुरुषका लागि महिला यौनाङ्ग तथा महिलाका लागि पुरुष यौनाङ्ग बिक्रीमा राखेका छौं ।' विश्वबजारमा पाइने अत्याधुनिक यौनसामग्री नेपाल भित्र्याएको बताउने स्वीट सेक्रेटले यौनसम्बन्धमा अझ खुशी थप्न यो प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।
'लामो समयको अध्ययनपछि नेपाली जनताको एक वर्ग यो विषयमा चासो राख्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर व्यवसाय सुरु गरेका हौं,' ढकालले भने- 'कृत्रिम यौनांग प्रयोग गर्ने चाहना राख्ने नेपालीले अब कृत्रिम यौनाङ्ग खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुगिरहनुपर्दैन ।'
आफूलाई यौन प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने खेलौनाको बृहत् व्यावसायिक कारोबार प्रारम्भ गर्ने पहिलो नेपाली व्यापारिक संस्था बताउने स्वीट सेक्रेटमा ९५ प्रतिशत महिला कृत्रिम यौनाङ्गमा भाइब्रेसन छ । सिंगल तथा डबल भाइब्रेसनले यौनसम्बन्धलाई अझ रोमाञ्चक बनाउने ढकाल बताउँछन् । महिलाको सानो तथा ठूलो नांगो शरीर खेलौनामा उपभोक्ताले धीत मर्ने गरि यौनसम्बन्ध राख्न सक्ने उनले बताए । न्याकेड डलमा ब्याट्री राखिएकाले यसले विभिन्न स्वरूपमा शरिर रोटेसन गर्नुका साथै उत्तेजनामा रहेका महिलाको जस्तै आवाज पनि निकाल्छ ।
महिलाको शरीरमा अगाडिको यौनांगका अतिरिक्त नितम्ब भएका खेलौना शरीर पनि छन् । हामीसँग भएकामध्ये हाफ बडी सेप बढी रुचाइएको छ, प्रबन्ध निर्देशक पौडेल भन्छन्- 'साना फुल बडी पनि उत्तिकै लोकपि्रय छन् ।' स्वीटसेक्रेटले यौन सम्बन्धका बेला टङ किसका लागि फ्लेस लाइट अर्थात् मुखकै आकारको अंग पनि बिक्रीमा भएको बताएको छ । जसबाट उपभोक्ताले महिलाको मुखमा चुम्बन गरेकै अनुभूति पाउने व्यवसायी पौडेलले बताए ।
यौन सम्बन्धमा समस्या हुनेहरूका लागि कृत्रिम यौनाङ्गको प्रयोग उपयुक्त हुने कुरा पुरानो भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ढकाल भन्छन्-'कुरा के हो भने नियमित फ्रेन्ड्ली सेक्स गरिरहेका दम्पतीले वाइल्ड सेक्सको चाहना राख्ने क्रममा अत्यधिक सन्तुष्टिका लागि यस प्रकारका साधन प्रयोग गर्ने हो ।' स्वीट सेक्रेटमा पुरुषलाई चाहिने २७ प्रकारका महिला कृत्रिम यौनाङ्ग उपलब्ध छन्, जसमा डबल भेजिना भएको डल पनि छ ।
त्यस्तै महिलाका लागि ३० प्रकारका पुरुष कृत्रिम यौनाङ्ग बिक्रीमा छन्, जुन ५ देखि १० इञ्च सम्मका छन्, जसले अत्यधिक उत्तेजनामा ल्याउनुका साथै प्रयोगमा पनि साथ दिन्छन् । रेगुलर सेक्सबाट दिक्क भएकाहरूलाई नयाँपन खोज्ने क्रममा पुरुष सेक्सटोयले साथ दिन्छ । पुरुष लिंगमा पनि भाइब्रेसन भएकाले यसले छिट्टै चरम उत्तेजनामा पुर्‍याउँछ ।
हार्नेस अर्थात् पेटीसमेत भएको यो पुरुष लिंग महिलाले बाँधेर अर्को महिलालाई सेक्स गर्न उपयोगी छ । प्रबन्ध निर्देशक पौडेलका अनुसार लेस्वियन अर्थात् महिला महिलाबीचको यौन सम्बन्धका लागि यो साधन उपयोगी छ, त्यतिमात्र होइन, लिंग कमजोर भएका तथा पूर्ण रूपमा उत्तेजित नहुने पुरुषले पनि यो साधन प्रयोग गर्न सक्छन् ।
पुरुष कृत्रिम लिंगको साइज विभिन्न आकारमा उपलब्ध भए पनि यसलाई पम्प गरेर कडा वा अझ ठूलो गर्न सकिन्छ । यौनसम्बन्धको समयमा त्यसलाई पम्प दिएर भित्र नै ठूलो आकारको बनाउन सकिन्छ । साइज मेन्टेन गरेर महिलाले सन्तुष्टि पनि लिन सक्छन् । पुरुष कृत्रिम लिंगमा स्पाइनी भाइब्रेटर लिंग अर्थात् जता पनि फोल्ड गर्न मिल्ने पुरुष लिंग लोकपि्रय छ । यस्तै बेलुनको पृष्ठभूमिमा अडिएको पुरुष लिंगको सहायतामा महिलाले पुरुषसँगै सेक्स गरेको अनुभूतिमा सम्बन्ध राख्न सक्छन् ।
यौनसन्तुष्टि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ल्युब भएको प्रमुख कार्यकारी ढकाल बताउँछन् । महिलाको शरिरबाट निस्कने चिप्लोपन जस्तै यो ल्युबले बढी यौनसन्तुष्टि दिन्छ । ड्युरेक्स प्ले वार्मिङ तथा ड्युरेक्स प्ले लङलास्टिङ दुईवटा ल्युब बढी प्रयोगमा आउने ढकालले बताए । महिला तथा पुरुषको लिंगलाई हिट गर्न ड्युरेक्स प्ले वार्मिङ र धेरै समय यौनसम्पर्क राख्न ड्युरेक्स प्ले लङलास्टिङ उपयोग गर्न सकिन्छ । ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेका यी साधन उपयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई कुनै असर पर्दैन ।
कृत्रिम यौनाङ्ग र नेपाली समाज
भाइब्रेटिङ पेनिस, पुसिज टोय तथा डल पुसी टोयका विभिन्न मोडल यौनसम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुन्छन् । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा कृत्रिम यौनसामग्रीको प्रयोग सामान्य भए पनि नेपाली परिप्रेक्ष्यमा यो नौलो कुरा हो । यौनका विषयमा अझै पनि गोप्य रहन रुचाउने नेपाली समाज भित्रभित्रै भने यस प्रकारका कृत्रिम साधनको उपयोगमा रुचि राख्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 'भन्नलाई विकृति भनिन्छ,' प्रबन्ध निर्देशक ढकाल भन्छन्- 'तर उपभोक्ताको रुचि हेर्दा कृत्रिम यौनाङ्गको सहायताले सेक्ससम्बन्ध फ्रेस राख्न चाहनेहरू पनि उत्तिकै छन् । बजारको रुचि हेर्दा आफूहरू उत्साहित भएको उनी बताउँछन् ।
'कृत्रिम यौनांगको प्रयोगलाई यौन समस्याका लागि होइन, सौखका रूपमा उपभोक्ताले लिनेछन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,' प्रमुख कार्यकारी प्रविन ढकाल भन्छन्- 'दैनिक हस्तमैथुन गर्नुपर्ने युवाहरूका लागि कृत्रिम यौनाङ्गको प्रयोग उपयोगी छ ।' यौनसाथी नभएका युवायुवतीलाई यौन आनन्द हासिल गर्न पनि यस प्रकारका यौन खेलौना महत्वपूर्ण सावित हुने यौन तथा प्रजनन विज्ञ डा. खेम कार्की बताउँछन् । डा. कार्की भन्छन्- 'तर प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।'
प्राकृतिक यौनसम्बन्धको अभावमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधतर्फ उन्मुख हुने युवाजमातलाई नियन्त्रणमा ल्याउन होस् वा असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जीवनलाई जोखिममा पुर्‍याउनेहरूलाई यौनसन्तुष्टि दिलाउन कृत्रिम यौनांगको प्रयोग उपयोगी हुन्छ । त्यस्तै नियमित यौनसम्बन्धबाट दिक्क भएका तथा पर्याप्त यौनसन्तुष्ट हासिल गर्न नसकिरहेका दम्पतीहरूको हकमा पनि यस्ता यौनसामग्रीको प्रयोग त्यत्तिकै लाभदायी हुनसक्छ । प्रबन्ध निर्देशक पौडेल भन्छन्- 'जीवनसाथी विदेशमा भएकाहरूलाई त 'सेक्सुअल रिलेसन मेन्टेन' गर्न बाहिर अनैतिक सम्बन्ध राख्नुको सट्टा सेक्सटोय प्रभावकारी हुन्छ ।' त्यस्तै यौनलाई अनावश्यक महत्व दिएर जंगली प्रवृत्तिले बलात्कार गर्न खोज्नेहरूलाई पनि सेक्सटोयको प्रयोगले नियन्त्रणमा ल्याउँछ ।
विदेश बसेर आएका नेपालीहरू यस्ता यौन सामग्रीमा अभ्यस्त भैसकेका हुन्छन् । खासगरी उच्च सम्भ्रान्त परिवारका नेपालीहरू यस्ता सामग्री प्रयोगलाई सामान्य मान्छन् । उच्च आयस्रोत भएका परिवारका सदस्यहरूले विदेशबाटै मगाए पनि सेक्सटोयको आनन्द लिने गरेका छन् । कृत्रिम यौनांग, विभिन्न स्वरूप र प्रकारका कन्डम, यौनांगको आकार बढाउने सामग्री तथा ल्युबहरूको बिक्री-वितरण गर्ने अनुमति लिएर स्वीट सेक्रेटले काम गरेको हो । यौन साथी नभएकाहरू, विदेशमा रहेका श्रीमान्-श्रीमतीका नेपालमा बस्ने जीवनसाथीहरू, असुरक्षित यौनसम्बन्ध राख्न नचाहनेहरू, विवाहेत्तर यौनसम्बन्ध राख्न नचाहनेहरूलाई यस्ता सामग्रीका लक्षित उपभोक्ता मानिन्छ ।
२ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मका सेक्सटोय स्वीट सेक्रेटमा उपलब्ध छन् । डबल पुसी विथ साउन्डलाई अलि बढी पर्छ, त्यस्तै नेपाली बजारमा ५ रुपैयाको ढाल देखि ६ सय ५० रुपैयाँको क्रिस्टल कन्डम उपलब्ध छन् ।
भच्र्युअल सेक्सटोय घरभित्र एक्लै रहँदा अवस्था हेरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । सेक्स जति गोप्य हुन्छ, यी साधन पनि त्यत्तिकै गोप्य ढंगले उपयोग गर्न उपभोक्ताले जानेका हुन्छन्, प्रबन्ध निर्देशक पौडेल भन्छन्- 'यी साधनलाई उपयोग गर्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधि पनि जानकारी गराइन्छ ।' 'नेपाली समाजमा यो कुरा असमान्य लागे पनि यहाँ यौनतनावबाट गुज्रनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।' यौन तथा प्रजनन विज्ञ डा. कार्की भन्छन्- 'त्यसैले पनि सेक्सटोयको अपरिहार्यतालाई समाजले क्रमशः बुझ्दै जानेछ ।'
सस्तोमा स्तरीय कन्डम
बजारमा महँगो मूल्यमा लक्जरियस कन्डमको व्यवसाय भैरहेको देखेर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बिजनेस सलुसन प्रालीले सस्तोमा स्तरिय कन्डम नेपाली बजारमा भित्र्याएको बताएको छ । एकान्तकुनास्थित यो कम्पनीले हाल एप्पल, बनाना र स्ट्रबेरी ३ फ्लेभरमा कन्डम भित्र्याएको बजार अधिकृत राजीव न्यौपानेले बताए । न्यौपानेका अनुसार सबैभन्दा पातलो अल्ट्रा थिन कन्डम पनि नेपाली बजारमा आएको छ, जसमा विभिन्न भेराइटी उपलब्ध छन् । उपभोक्तालाई कम मूल्यमा राम्रो गुणस्तरको कन्डम दिने आफ्नो लक्ष्य रहेको न्यौपानेले बताए ।
यौनका विषयमा नेपाली समाज खुलेर चर्चा गर्न चाहँदैन । यो यथार्थलाई बुझेर प्रेक्सिस ग्रुपको स्वीट सेक्रेट आउटलेटले www.sweetsecret.com.np सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेक्सटोयको जानकारी तथा त्यसको उपयोगका विषयमा यो वेबसाइटमा विस्तृत रूपमा बताइएको छ । महिला तथा पुरुष सेक्सटोयका विभिन्न मोडलका बारेमा वेबसाइटमा जानकारी उपलब्ध छ । विभिन्न मोडलका सेक्सटोयको मूल्य र उपयोगिता वेबसाइटमा उल्लेख छ, जसअनुसार उपभोक्ताले अर्डर गरेर अनलाइन खरिद गर्न सक्छन् । वेबसाइटमा सबै सेक्सटोयको विशेषता पनि उल्लेख छ । चाँडै नै इटहरी तथा पोखरामा शाखा खोल्ने तयारीमा रहेको स्वीट सेक्रेटले गोप्य रूपमा कारोबार गर्न चाहनेहरूलाई पनि सुविधा दिने बताएको छ ।